Booliiska Kenya oo ‘raadinaya’ Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh oo 5-cishe la la’ yahay! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Booliiska Kenya oo ‘raadinaya’ Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh oo 5-cishe la la’ yahay!
Booliiska Kenya oo ‘raadinaya’ Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh oo 5-cishe la la’ yahay!
Cabdicasiis Sheekh Cabdisamad oo walaal la ah Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in Dowladda Kenya ay u gudbiyeen xog la xiriirta in ay waayeen xogta Aqoonyahankaan.
7-dii September 2021 oo ah (Talaadadii) todobaadkii hore ayaa la waayay aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, waxa uu joogay xiligaas Magaalada Nairobi Caasimadda Kenya sida ay xaqiijiyeen ehelkiisa.
Xubno katirsan Qoyska oo tagay Saldhigyada Ciidanka ayaa gudbiyay xogtiisa oo dhammeystiran si ay kaalin uga qaataan ciidamada Booliiska raadinta Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo loo badinayo in la afduubtay.
“Meel kasta waan tagnay waan raadinay, Dowladda waan u sheegtay, waxaa nagu dambeysay talaadadii 10:00 AM, waxaa laga qaatay Magaalada Nairobi, wax aan ognahay oo aan tuhmeyno ma jiro, Laamaha ammaanka way ka gaabiyeen” ayuu yiri Cabdicasiis Sheekh Cabdisamad oo walaal la ah Aqoonyahanka la waayay.
“Maxkamadaha ayaan aadeynaa si aan gal-dacwadeed ka furano si ciidamada ammaanka oo ka gaabiyay arrintiisa lagu qasbo sidii ay u keenni lahaayeen, guud ahaan waxa aan dadka ka dalbaneynaa in ay nagu gacansiiyaan arrintaan oo murugo gaar ah qoyska ku reebtay” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waxa uu Warbaahinta Nation ee dalka Kenya waxa uu Aqoonyahankaan ku qori jiray aragtidiisa siyaasadeed oo uu inta badan diiradda ku saarayay Bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya, halka bartiisa Twitter-ka uu joogto usoo gelinayay qoraallo.
Dowladda Kenya weli kama aanay hadlin, 2021-ka waxaa dalkaas ka dhacay dhowr afduub oo loo geystay Haween ganacsatado ah, kooxihii qafaashay ayaa u geystay dhaawacyo kala duwan, waxa ay sidoo kale dileen oo meydkiisa la galay Ganacsade lagu magacaabo Bashiir Gaboobe.
Next articleMareykanka muxuu ka bartay weerarkii 11-ka September 2001?